Maxaa hortaagan dhismaha Maxkamadda Dastuuriga? – Kalfadhi
Dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya ayaa dhigaya dhismaha maxkamad dastuuri ah oo uu dalku yeesho. Maxkamaddaasi waa garsooraha kama dambeysta ah ee arrimaha dastuurka. Waxaa awood loo siiyay fasiraadda dastuurka; go’aan-ka-gaarista khilaafaadka, xilalka iyo awoodaha u dhexeeya hay’adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka, dowlad-goboleedyada iyo dhaqan-gelinta sarreynta dastuurka si madax-bannaan oo xor ka ah fara-gelin kaga timaada heer kasta oo hay’adaha dowladda ah.
Maxkamadda dastuuriga ah waxay yeelaneysaa shan garsoore oo midkiiba aysan da’iisa ka yaraan karin 40 sano, kuwaas oo leh kaaliyeyaal, howl-wadeenno iyo shaqaale kale. Garsooraha sare ee maxkamadda, ku-xigeenkiisa iyo garsooreyaasha kaleba muddo xileedkooda waa shan sano oo halmar la cusbooneysiin karo.
La’aanta maxkamad dastuuri ah oo loo laabto ayaa loo sababeeyaa isqabqabsiga dhinaca sharciga ah ee madaxda dowladda federaalka ah iyo iyaga iyo kuwa dowlad-goboleedyada.
Caddad ma laha inta jeer ee la isku qabtay arrimo la xiriira dastuur. Dowladihii hore waxay la noolaayeen khilaafyo joogto ah oo dib-u-dhac u keenay dalkan. Inkastoo dadka qaar ay qabaan in dowladda Soomaaliya ee xilligan uu ku yar yahay khilaafka madaxda haddana waxaa la rumeysan yahay in xiriirka ay la leedahay dowlad-goboleedyada uu dhowr uusan mar walba wanaagsaneyn; waana midda abuureysa baahida maxkamad dastuuriga ah.
Wasiirka Dastuurka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa Kalfadhi u sheegay in ay ahayd maxkamadda dastuuriga ah in la dhiso horraantii sanadkii 2013. Hase yeeshee aan lagu guuleysan. Wuxuu xusay in wasaaradda caddaaladda oo ay shaqadeeda tahay ay hadda dhammeystirtay sharcigii lagu dhisi lahaa, kaas oo ay horgeyn doonto baarlamaanka. Wuxuu rajo ka muujiyay inta uusan xirmin kalfadhigan saddexaad in uu dhameystirmi doono sharcigaas.
Wasiirka Dastuurka ee Xukuumadda Soomaaliya, Mudane Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil
“Mar dhow magacaabis ayaa billaabanaysa. Waxaan qiyaasayaa waxaas oo dhan inay ku qabsoomi karaan 3 ilaa 4 bilood,” ayuu yiri .
Wuxuu aaminsan yahay in dhismaha maxkamaddan ay horseedi doonto xasillooni siyaasadeed, dib-u-heshiisiin iyo xitaa inay tahay meesha ugu sarreysa ee qofka shacabka ah uu xuquuqdiisa u doonan karo. Inkastoo dhismaha maxkamaddan ay ku xiran tahay in la qabyo-tiro dastuurka ayaa haddana la hirgelin doonaa Golaha Adeegga Garsoorka si loo helo garsoor hufan oo ay ka muuqato dowlad-wanaag.
“Waxyaabo badan oo dastuuri ah ayaa la isku qab-qabsadaa; qof walba siduu rabo ayuu u fasirtaa; maamul goboleed ha noqdo, shakhsi ama dowladda federaalka ah. Maxkamadda dastuuriga waa midda kala hageysa isku dhacyadaas – iyadoo sameyneysa fasiraad dastuuri ah,” ayuu yiri wasiir Xoosh.
Miisaanka sharci ee ay la maqan tahay Maxkamadda Dastuuriga
Shaqada Maxkamadda Dastuuriga ah waxaa hadda si kumeel gaar ah u qabata maxkamadda sare oo ay muhiim tahay inay kala madax-bannaanaadaan sida uu aaminsan yahay Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo ah sharci-yaqaan iyo qareen ka howlgala maxkamadaha Soomaaliya.
Qareenka oo la hadlay Kalfadhi ayaa tusaale u soo qaatay go’aan Maxkamadda Sare ay ka gaartay xubno ka tirsan baarlamaanka oo ay tiri ‘kuma imaan sharci ee ha lagu laabto’ balse loo hoggaansami waayay. Wuxuu sheegay in halis dhinac kasta saameyn karta ay ka dhalan karto haddii aan sharciga loo hoggaansamin.
Baahida ah in la helo Maxkamadda Dastuuriga ah waxaa sii kordhineysa madaxda iyo maamullada isku qabsada sharciyada oo u baahan kala saaris. “Ka sokow hay’adaha qaranka, dowlad-goboleedyadda waxay leeyihiin dastuur iyo hey’ado dastuuri ah, si loo kala saaro inay ku dhaqmaan iyo in kale, waxa kala saaraya waa maxkamad dastuuri ah, waana midda baahida kordhinaysa,”ayuu yiri.
Wasiir Xoosh ayaa sheegay in dhismaha Maxkamadda Dastuuriga ah iyo qabyo-tirka dastuurka ay isku xiran yihiin, isagoo rajo ka muujiyay dastuurka in la dhameystiri karo inta uusan dhamaan sanadkan 2018.